The iPhone Power Button Nọgidesiri! Na m ga-eme? - Payette Gaanụ n’ihu - Ndị Ọzọ
iphone m dị oji wee kwụsị
iphone anaghị ejikọ na iTunes
bọtịnụ olu anaghị arụ ọrụ na iphone 4
ndozi ihuenyo iphone 6s gbawara agbawa
The iPhone Power Button Nọgidesiri! Na m ga-eme?
Ike button gị iPhone rapaara na ị maghị ihe na-eme. Igodo ike (nke a makwaara dị ka bọtịnụ ike) hie ụra / teta ) bụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa bọtịnụ na gị iPhone, ya mere, mgbe ihe na-aga na-ezighị ezi na na button, ọ pụrụ ịbụ isi mgbaka. N’isiokwu a, m ga-akọwara gị ihe ị ga-eme mgbe bọtịnụ ike iPhone gị anaghị arụ ọrụ na m ga-akwado gị ụfọdụ ndozi nhọrọ otú i nwere ike ịrụzi gị iPhone na-eme ka ọ na-arụ ọrụ dị ka ọhụrụ .
IPhone Soft Rubber Cases na Ike bọtịnụ: A Quirky Trend
David Payette, onye bụbu onye Apple, mere ka m mara otu ihe dị iche na iPhone na bọtịnụ ike ya: Ha na-adịkarị n'ime ụlọ rọba dị nro n'elu bọtịnụ ike .
otu esi edozigharị ọnọdụ gị na iphone
A na-eme ụfọdụ ikpe nke roba dị nro nke na-achọ ịkwụsị oge, ma ewezuga ọ bụrụ na ọ ga-eyi akwa na akwa akwa, a na-ejikarị akpa roba dị nro na iPhones na bọtịnụ ike agbaji. Ọzọkwa, ọ kwetara nke ahụ Ọtụtụ mmadụ Jiri mkpuchi roba na iPhones ha - mana omume a na-ahụkarị ịhapụ.
Ọ bụrụ na bọtịnụ ike dị na iPhone gị anaghị arụ ọrụ, ị nwere ike ịchọ ịtụle iji ejiji roba gị n'ọdịnihu.
Etu aga esi dozie bọtịnụ ike iPhone
AssistiveTouch: A Nwa Oge Ngwọta Ọ bụrụ na gị iPhone si Power Button Nọgidesiri
Mgbe iPhone ike button rapaara, nnukwu nsogbu ndị mmadụ nwere bụ na ha enweghị ike igbachi ma ọ bụ gbanyụọ gị iPhone. Ọ dabara nke ọma, ịnwere ike ịhazi bọtịnụ mebere site na iji AssistiveTouch , nke na-enye gị ohere igbachi ma gbanyụọ iPhone gị na-enweghị iji bọtịnụ ike nkịtị.
Iji rụọ ọrụ AssistiveTouch, malite site na imeghe ngwa Ntọala. Metụ Nweta -> AssistiveTouch , wee pịa ihe mgba ọkụ na-esote AssistiveTouch.
kedu ihe bụ obere akpa na iphone
Mgbanwe ahụ ga-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ iji gosi na AssistiveTouch dị na bọtịnụ mebere ga-egosi na gị iPhone ihuenyo. Nwere ike ịmegharị bọtịnụ mebere ebe ọ bụla ịchọrọ na ihuenyo iPhone gị site na iji mkpịsị aka gị dọrọ ya na ihuenyo.
Otu esi eji AssistiveTouch Dị ka bọtịnụ ike
Malite site na ịpị bọtịnụ AssistiveTouch mebere, wee pịa Ngwaọrụ , nke dị ka iPhone. Igbachi gị iPhone, enweta na mkpọchi mkpọchi , nke dị ka mkpọchi. Ọ bụrụ na ị chọrọ ihichapụ iPhone gị iji AssistiveTouch , pịa ma jide akara ngosi ihuenyo mkpọchi ruo mgbe 'Slide to Power Off' na akara uhie na-acha uhie uhie na-egosi na ihuenyo iPhone gị. Mia akara ngosi ike site n'aka ekpe gaa n'aka nri iji gbanyụọ iPhone gị.
Kedụ ka m ga-esi tụgharịa iPhone m ma ọ bụrụ na bọtịnụ ike ahụ anaghị arụ ọrụ?
Ọ bụrụ na bọtịnụ ike rapaara, ịnwere ike ịgbanye iPhone gị site na ịwụnye ya na isi iyi ike ọ bụla, dịka kọmpụta ma ọ bụ chaja mgbidi. Mgbe ejikọta gị iPhone ka a ike isi iyi na gị USB Lightning (eriri USB), akara Apple ga-egosi na ihuenyo iPhone gị tupu ịgbanwuo. Atụla anya ma ọ bụrụ na ọ na-ewe nkeji ole na ole tupu iPhone gị agbanye!
Ọ bụrụ na iPhone gị agaghị agbanye ma ọ bụrụ na agbanye ya na isi iyi, enwere ike ịnwe nsogbu ngwaike dị mkpa karịa naanị bọtịnụ ike ejidere. Ọzọ, anyị ga-atụle nhọrọ mmezi gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ idozi bọtịnụ ike gị.
Enwere m ike idozi My iPhone Power Button Site Onwe M?
Eziokwu dị mwute bụ, ma eleghị anya ọ bụghị. David Payette na-ekwu na dịka onye ọrụ Apple nwere ahụmịhe na-arụ ọrụ na ọtụtụ narị iPhones, mgbe bọtịnụ ike na-arapara, ọ na-araparakarị maka ihe ọma. Nwere ike ịnwale iji ikuku jikọtara ọnụ ma ọ bụ ahịhịa mgbochi iji wepụ irighiri ihe ma ọ bụ ájá, mana ọ na-abụkarị ihe furu efu. Mgbe obere oge opupu ihe ubi dị n'ime bọtịnụ ike gbasaa, enweghị ọtụtụ ihe ị ga - eme iji dozie ya.
Ọ bụrụ na gị iPhone ka n'okpuru akwụkwọ ikike, Apple Store nwere ike ekpuchi ụgwọ nke mmezi ahụ. Nwere ike ịga na ebe nrụọrụ weebụ Apple lelee akwụkwọ ikike ọnọdụ gị iPhone . Ọ bụrụ na ị kpebie ịga ụlọ ahịa Apple gị, anyị na-akwado gị mee oge obula , dị nnọọ iji jide n'aka na mmadụ nwere ike inyere gị aka ozugbo ị rutere.
anaghị anata imessages na iphone
Apple nwekwara ọrụ rụkwaa site na mail nke ha ga-eji dozie iPhone gị ma weghachi ya n'ọnụ ụzọ gị.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịrụzi iPhone gị taa, Pulse o nwere ike ịbụ nhọrọ kacha mma maka gị.Pulsebụ a-atọ ndị ọzọ idozi ọrụ na-eziga a gbaara akwụkwọ technician n'ụlọ gị ma ọ bụ n'ebe ọrụ ịrụzi gị iPhone. Mmezi nkePulseEnwere ike mezue ha n'otu awa ma chebe ha site na ndụ ha niile.
IPhone Ike Button: Ofu!
A gbajiri iPhone ike button mgbe niile mgbaka, ma ugbu a na ị maara ihe na-eme mgbe ọ na-eme. Anyị na-atụ anya na ị ga-ekekọrịta isiokwu a na mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụ hapụ anyị okwu n'okpuru ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara iPhone gị. Daalụ maka ịgụ isiokwu a,